LEGO Black Friday သဘောတူညီချက်သည် ၂၀၂၁ တွင် Brick Fanatics
LEGO Black Friday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်
ဒီမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် Black Friday ကနေမျှော်လင့်ဖို့အရာအားလုံးအပြည့်အစုံကိုဒီမှာ LEGO.com တတိယ-partအခမဲ့လက်ဆောင်များ၊ လျှော့စျေးများ၊ အပိုဆု VIP အမှတ်များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င် UK နှင့် US ရှိလက်လီအရောင်းဆိုင်များ
LEGO Black Friday လျှော့စျေး
Black Friday ကိုမကြာခဏခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည် LEGO.com အစုစုတစ်ခုလုံး၏လျှော့စျေးများကိုအပိုင်းအခြားအားဖြင့် Lego အငြိမ်းစားနှင့်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်အစုံ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည် ၇၅၂၄၄ Tantive IV, 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန် နှင့် 853967 သစ်သား Minifigureဒါတွေအားလုံးဟာထုတ်လုပ်မှုကနေအငြိမ်းစားယူခဲ့ကြတာပါ။
ဤနှစ်သည် ၂၀၂၁ တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာမည့်အတွဲများအတွက်တန်းတူရက်ရောမှုလျှော့စျေးများကိုမြင်နိုင်ပြီးဤ Black Friday ဖြစ်သည် Lego အချိန်မနှောင်းမီသင်၏ဆန္ဒရှိသောဆန္ဒအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည် freebies အချို့ကိုမပေးဘဲ Black Friday စျေးဝယ်ပွဲအားဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခဲသည်။ ယမန်နှစ်က 150 150 / $ 40410 အော်ဒါမှာထားသော 20.99 Charles Dickens Tribute အတွက် qualified 20.99 / $ 200 တန်ဖိုးရှိအမိန့်များသည်ယခင် VIP Weekend တွင်£ 200 / $ 5006291 အော်ဒါများ၊ ယခင် VIP Weekend တွင်24 / $ 11.99 တန် 11.99 XNUMX × XNUMX Teal Brick set ကိုအပိုဆုရခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး Black Friday Lego ခဏလောက်အပေးအယူလုပ်ပါ။
အဆိုပါ နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများ 40483 Luke's Lightsaber-အထင်ကရ Skywalker အမွေအနှစ်တည်ဆောက်နိုင်သည့်ဗားရှင်းသည်ယခုနှစ် Black Friday လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးထိုသတင်းများသည် 75313 AT-AT ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
LEGO VIP အမှတ်နှစ်ဆ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် VIP Weekend - မတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Lego Black Friday ကမ်းလှမ်းချက်များ - တနင်္ဂနွေတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကို VIP အမှတ်နှစ်ဆယူဆောင်လာသည်။ အမှတ်နှစ်ဆသည်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများ (သို့) သီးသန့်ဆုလာဘ်များအတွက်သုံးစွဲရန် ၁၀% ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ညီမျှသည်၊ ၎င်းကိုသင်အများဆုံးတွေ့ရသောအကောင်းဆုံးလျှော့စျေးကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်သည်။ Lego အဖွဲ့၏သီးသန့်အစုံဖြစ်သည်။
Black Friday ပိတ်ရက် (သို့) ၂၀၂၁ တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော VIP Weekend နှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သွားမလားဆိုတာငါတို့မသိသေးပေ၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာမနှစ်ကအခြေခံပြီးအတော်လေးလုံခြုံတဲ့ယူဆချက်ဘဲ။
ရှားပါး LEGO လက်ဆောင်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည်များသောအားဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းအစုံများကို p အဖြစ်ပေးသည်art သူတို့ရဲ့ Black Friday Lego အပေးအယူ။ ဤအရာများကိုပုံမှန်အားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအော်ဒါများအားအခမဲ့ပေးသည်၊ သို့သော်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည် - စျေး ၀ ယ်ရန်ပိုကောင်းသောမက်လုံးတစ်ခုပေးသည်။ LEGO.com Black Friday ကာလ၌
အငြိမ်းစား LEGO သည် Black Friday သဘောတူညီချက်များသတ်မှတ်သည်
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ Lego ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာလိမ့်မည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ တိုင်းအတွက်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကောက်နုတ်ချက်အတွက် Lego ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူပါ၊ Black Friday အတွက်သိသိသာသာလျှော့စျေးများဖြစ်နိုင်သည်။ ဟိ Lego အငြိမ်းစားယူရန် Black Friday သဘောတူညီချက်များကို Group ကယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Lego အပါအဝင်အစုံ ၇၅၂၄၄ Tantive IV နှင့် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ၂၀၂၁ တွင်တူညီသောချဉ်းကပ်ပုံကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့သြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
LEGO စျေးနှုန်းသည် ၂၀၂၂ တွင်မြင့်တက်လာသည်
အဆိုပါ Lego အုပ်စုရှိပါတယ် အတည်ပြုပြောကြား အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများတစ်လျှောက် RRP များတစ်သမတ်တည်းဖြစ်စေခြင်းကြောင့်အချို့သောအချို့သောစျေးနှုန်းများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ကျဆင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သက်ရောက်မှုများစာရင်းကိုမပံ့ပိုးပေးသော်လည်း၊ ကောလာဟလသတင်းများ ပါဝင်သည် ၇၅၂၅၅ Yoda နှင့် 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောမရ။ မင်းအနောက်ဥရောပကဒါကိုမင်းဖတ်နေရင် Black Friday ကအတိုးကိုမပေးဆပ်ဘဲနဲ့အဲဒီ့အစုံတွေကိုကောက်ဖို့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Lego Star Wars Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
Black Friday သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးကြီးလှသောသူများကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် Lego Star Wars အထူးသဖြင့်လျှော့စျေးများ၊ အပိုဆု VIP အမှတ်များနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်များကို ကျေးဇူးပြု၍ သင်မျက်စိမြင်ခဲ့သည် Lego အဖွဲ့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပွဲပိတ်ရက်တွင်ကမ်းလှမ်းသည်။ တကယ်ပါပဲ, Star Wars Black Friday ကိုစုဆောင်းရန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အပေးအယူ။ ဒီမှာ LEGO တိုင်း Star Wars Black Friday သဘောတူညီချက် ဒီနှစ်မှာမျှော်လင့်ဖို့
Lego Star Wars UCS AT-AT Black Friday မိတ်ဆက်ပွဲ
ကောလာဟလများ AT-AT သည်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုလနှင့်ချီ။ အွန်လိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည် Lego Star Wars Ultimate Collector Series များသည် ၂၀၂၁ တွင် Black Friday မိတ်ဆက်ပွဲကိုညွှန်ပြသည်။ စျေးနှုန်းကတော့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဖြင့်၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego Star Wars အစုံ။ ငါတို့ကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်တယ်။
LEGO Mandalorian Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
တွေဝေနေသော start in 75254 ကို AT-ST Raider ကို, အ Lego အဖွဲ့ကဝက်ပေါင်ပြည့်သွားပြီ Star Wars: The Mandalorian လွန်ခဲ့သော ၁၂ လက Mando အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြိုကျမှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၂၀၂၀ တွင်၎င်းသည် ၂၀၂၁ တစ်လျှောက်တွင်နောက်ဆက်တွဲပိုများလာသည် 75254 ကို AT-ST Raider ကို အကြီးမားဆုံးလျှော့စျေးကိုကြည့်ရန် Lego Black Friday ။ Black Friday တွင် Mando ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Lego ထောင်စုနှစ် Falcon Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
အမြဲရှိနေမှာလား Lego Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ စင်ပေါ်တွင်အဓိကနေရာဖြစ်ခဲ့သော ၂၀၂၁ တွင်နောက်ဆုံးအငြိမ်းစားယူပါ။ မဆိုထားနှင့် Brick Fanatics'' သတင်းရင်းမြစ်များက၎င်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိဆက်လက်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။ သို့သော်၎င်းကိုမဆိုလိုပါ Lego အုပ်စုသည် monolith ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်စွဲလမ်းနေဆဲငါတို့အားသူတို့ကိုသွေးဆောင်ရန်မကြိုးစားပါ Lego Star Wars Black Friday လျှော့စျေး၊ VIP အမှတ်များနှစ်ဆပင်လျှင်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်သီးသန့်ဆုလာဘ်များအတွက်သုံးစွဲရန်သိသိသာသာပြန်အမ်းငွေကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာက Black သောကြာနေ့
ပြန်လာကတည်းက Lego စတိုး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟယ်ရီပေါ်တာ တကယ့်ကိုဒုတိယသာဖြစ်ခဲ့သည် Star Wars ကြီးကြီးမားမားအစုံများအရလူကြီးများကို ဦး စွာ ဦး တည်။ အဓိကပစ်မှတ်ထားသည်။ ပထမတော့ရှိခဲ့တယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်; ဒါကြောင့်မနှစ်ကငါတို့ကိုခေါ်လာခဲ့တယ် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley; နောက်ဆုံးတော့ ၂၀၂၁ ကငါတို့ကို Hogw ၇၆၃၉၁ ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်arts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု
ထိုထုတ်ကုန်များအနက်မှသောကြာနေ့တစ်လျှောက်တွင်လျှော့စျေးသို့မဟုတ်မက်လုံးများဖြစ်နိုင်ချေကိုအခြားအရာများနည်းတူမြင်နိုင်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ Lego ဤနွေရာသီ၏နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်များအပါအ ၀ င်ຊຸດများ ၎င်းသည်ထိုလိုချင်သောရွှေ minifigures များကိုဖမ်းရန် (သို့) သင်၏ burgeoning modular Hogw ကိုချဲ့ထွင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။arts ပြသခြင်း။ မှတဆင့်နှိပ်ပါ တိုင်းများအတွက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ Black Friday သဘောတူညီချက်၊ လျှော့စျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်။
လူကြီးများအတွက် LEGO Black Friday အပေးအယူ / LEGO Creator Expert Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
အဆိုပါ Lego Black-boxed အဖွဲ့၏အပိုင်းသစ် လူကြီးများအတွက် Lego အစုံ (ယခင်ကအဖြစ်လူသိများသည် Lego Creator Expert) Black Friday တွင်အချို့သောအထူးလျှော့စျေးများအတွက်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အငြိမ်းစားယူခြင်းအစုံပါဝင်သည် 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် နှင့် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster သူတို့သည်သူတို့၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်သို့ရောက်သောအခါငွေစုခြင်းကိုနှစ်သက်ဖွယ်ရှိပုံပေါ်သည် Lego Creator Expert Modular အဆောက်အ ဦး များစုဆောင်းခြင်း။
တခြားနေရာ, Lego Creator Expert အပါအဝင်ကားများ 10265 Ford ကား Mustang or ၁၉၆၉ Fiat 10271 Black Friday သဘောတူညီချက်များအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အများဆုံးပေးထားတယ် လူကြီးများအတွက် Lego or Lego Creator Expert set များကိုသာရနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များသည်၊ ထို့ကြောင့်အခြားနေရာများတွင်လျှော့စျေးများကိုမြင်ရမည်မဟုတ်ပါ၊ VIP အမှတ်များနှင့်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်နှစ်ချက်မဆိုဘဲချက်ချင်းသင်၏ချွေတာမှုစာရင်းထဲသို့ ၀ င်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သင့်သည်။
Lego Ideas Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
တစ်အရေအတွက်ကို Lego Ideas အဖွဲ့များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း နှင့် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘောမရ။ Black Friday အတွက်နောက်ဆုံးမိနစ်လျှော့စျေးအချို့ကိုမြင်နိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်လူအုပ်အပါအဝင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆွဲဆောင်နိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည် 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, ၂၁၃၂၃ Grand Piano or 21324 123 နှမ်းလမ်း.
LEGO Super Mario Black Friday သဘောတူညီချက်များ
အဆိုပါ Lego စူပါမာရီယို theme သည် third-p မှတဆင့်လျှော့စျေးများအတွက်မထူးဆန်းပါartလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ Lego အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်။ Lego Black Friday သည်ဤအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆောင်ပုဒ်ကိုလျှော့စျေးဖြင့်တက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမျှော်လင့်လိမ့်မည်၊ တက်နေစဉ်မှာလည်းတက်သည် Lego လုပ်ငန်းစဉ်၌ VIP အမှတ်များ (နှင့်လက်ဆောင်များရယူရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ) ။ ဒီဘက်ကိုခုန်ပါ အားလုံး Lego စူပါမာရီယို Black Friday အပေးအယူ
လက်ရှိတွင်၎င်း၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုကျင်းပနေသည်။ Ninjago ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောင်မြင်သောနှစ်တစ်နှစ်ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည် အသစ်အစုံချည်နှောင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကြီးမားသောတိုက်ရိုက်စားသုံးသူအတွက်သီးသန့်ပင်ဖြစ်သည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်။ အဆိုပါ Lego အုပ်စုများသည် Black Friday သို့ရောက်လာသောပွဲလမ်းသဘင်များအပေါ်ဒိုင်ခွက်ကိုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် Ninjago အစုံ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အားလုံး Lego Ninjago Black Friday အပေးအယူ
Lego Batman Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည် Lego DC ဒီနှစ်မှာရှေ့၊ ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ Batman ဘယ်မှမသွားဘူး၊ Black Friday ရောက်လာရင်အရသာရှိတဲ့လျှော့စျေးကိုတွေ့နိုင်တဲ့ယခင်နှစ်တွေကအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီ၏ဝတ်စုံများသည်ရောင်းအားအတွက်ရင့်မှည့်သည်၊ ယခုနှစ်စျေးဝယ်ပွဲသည်လည်းအငြိမ်းစားယူရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်။ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileမရ။ အားလုံးကိုကြည့်ပါ Lego Batman Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ ဒီမှာ.
Lego Marvel LEGO Avengers များ Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
ဂိမ်းများနှင့်ရုပ်ရှင်များမှပြက္ခဒိန်များထွန်းကားရန်နှင့်ပုံမှန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တည်ဆောက်နိုင်သောအစုံများ၊ ဤအရာသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်များဖြစ်သည် Lego Marvel ဖဿ။ ဟိ Lego Black Friday ၂၀၂၁ ရောင်းအားသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တက်စေပါသည်။ Lego Marvel နှင့် Lego Avengers များသည် ၂၀၂၀ တွင်လျှော့စျေးအစုံများကိုအကြီးအဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည် 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ, Mysterio ၏ 76149 အဆိုပါဆိုထားပါသည်, Venom Mech vs. 76150 Spiderjet နှင့်ထို့ထက်ပိုသော၊ ဤဆောင်ပုဒ်သည် Black Friday ကိုများစွာမြင်နိုင်သည် Lego ဒီအချိန်ဝန်းကျင်မှာအပေးအယူလုပ်တယ်။ တိုင်းကိုရှာပါ Lego Marvel Black Friday 2021 သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
Lego CITY Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
Lego CITY ယမန်နှစ်ကအခြားနာမည်ကြီး collection တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Lego Black Friday ကဲ့သို့သောအစုံများဖြင့်ပြုလုပ်ပါ 60197 ခရီးသည်ရထား နှင့် 60233 Donut ဆိုင်ဖွင့်လှစ် စျေးနှုန်းကျဆင်းနေသည်။ ဒီနှစ်မှာစျေးလျှော့တာကိုငါတို့မြင်ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ် 60266 သမုဒ္ဒရာရှာဖွေရေးသင်္ဘော or 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှစ်ဆတိုးရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အလားအလာရှိသည် Lego တစ်ချိန်တည်းတွင် VIP အမှတ်များ ဒါကတော့ rundown အပြည့် of Lego CITYBlack Friday သဘောတူညီချက်များ
Lego Technic Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
Lego နည်းပညာ အတွဲများသည်အင်ဂျင်နီယာသွေးနှင့်အနာဂတ် George Stephensons တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဤကဲ့သို့သောကြီးကျယ်သောအသစ်ရောက်လာသူများအတွက်အလွန်စောလွန်းပေမည် 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား ၄၂၁၂၉ ၄ × ၄ Mercedes-Benz Zetros Trial Truck တွေရဲ့စျေးနှုန်းကသိသိသာသာကျဆင်းသွားတာကိုမြင်နိုင်ပေမယ့်ငါတို့ကအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်နဲ့နေနိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တစ်ချို့ကိုတွေ့ဖို့အလားအလာပိုများပါတယ် Lego နည်းပညာ Black Friday သဘောတူညီချက်များ၊ မနှစ်က tempters များအပါအ ၀ င် 42082 Rough Terrain Crane နှင့် 42098 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သောအရာအားလုံးကိုအနီးကပ်ကြည့်ရန် Lego နည်းပညာ ဒီနှစ်။
Lego Jurassic World Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ် Lego Jurassic Worldအစုံလွှတ်ပေးတာနဲ့ဘာတွေလဲ 76939 Stygimoloch Dinosaur ထွက်ပေါက် နှင့် 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲမရ။ မင်းရဲ့စုဆောင်းမှုမှာကြီးကျယ်တဲ့အသစ်တစ်ခုထပ်တိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တည်ဆောက်မှုကိုထည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမရှိ Lego Black Friday ၀ ယ်ခြင်းမှတဆင့် VIP အမှတ်များ၊ ၎င်း၌ကြည့်ရန်ရင်းနှီးသောမျက်နှာများစွာလည်းရှိသည် Jurassic World minifigure range အပြင်အသစ်အချို့လည်းပါပါတယ်။ Black Friday အတွက်ဒီဆောင်ပုဒ်မှာပါ ၀ င်တဲ့အလားအလာအချို့ကိုကြည့်ပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
Lego Friends Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
အသစ် ၁၈ ပုဒ်ထွက်လာပြီးနောက် Lego Friends နွေရာသီတွင်အစုံ၊ ဤစုဆောင်းမှုသည်ယခုနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒီနှစ်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လျှော့စျေးအချို့ကိုငါတို့မျှော်လင့်တယ် Lego Friends Black Friday သဘောတူညီချက်များသည်ယမန်နှစ်ကကမ်းလှမ်းမှုများပေါ်တွင်မူတည်သည် 41433 P ကိုarty လှေ နှင့် 41337 ရေအောက် Loopမရ။ ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ်, 41685 မှော် Funfair Roller Coaster or 41693 Surfer ကမ်းခြေ အများဆုံး၊ ဤအရာသည်စောင့်ကြည့်ရကျိုးနပ်သောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ခေါင်း ဘာကိုမျှော်လင့်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအတွက် Lego Friends Black Friday ကိုဖြတ်ပြီး
Lego Minecraft Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ
Minecraft ကျယ်ပြန့်တဲ့အထဲမှာရေဒါအောက်မှာပျံသန်းတတ်တယ် Lego အစုစု၊ သို့သော်၎င်းသည်ရပ်တန့်မသွားပါ Lego ဗွီဒီယိုဂိမ်းမှုတ်သွင်းထားသောဆောင်ပုဒ်တွင်အရည်အသွေးအစုံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ယခုနှစ် Black Friday သောကြာနေ့တို့တွင်အများအပြားထွက်ပေါ်လာနိုင်သည် Lego သဘောတူညီချက်များအပါအဝင် 21151 အဆုံးတိုက်ပွဲ နှင့် 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှုနှစ် ဦး စလုံးသည် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူသည်။ ဤတွင် ပြည့်စုံသောကြည့်ရှုပါ at Lego Minecraft၂၀၂၁ တွင် Black Friday အလားအလာများ
LEGO သည် Black Friday အပေးအယူများလုပ်သလား။
ဟုတ်ကဲ့ - အဲ Lego Group သည်၎င်း၏ Black Friday စျေးဝယ်ပွဲကိုကျင်းပလာခဲ့သည်မှာယခုဆိုလျှင်နှစ်အတော်ကြာပြီဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Black Friday ပြီးနောက်ပိတ်ရက်တစ်ခုလုံးတွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့နှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အပိုဆု VIP အမှတ်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများပေးသည်။
Black Friday သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည် Lego အုပ်စု၏ Black Friday ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ ၂၆ မှ ၂၉ အထိကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင်ကျရောက်သော Cyber ​​Monday အပါအ ၀ င်၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ Lego Black Friday အတွက်သီးခြားသဘောတူညီချက်များ
LEGO Black Friday ရောင်းပွဲသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။
အဆိုပါ Lego Black Friday ရောင်းပွဲသည် Cyber ​​Monday အပါအ ၀ င် Black Friday ပိတ်ရက်တစ်ခုလုံးအတွက်ကြာရှည်လေ့ရှိသော်လည်း၎င်း၏ ၀ ယ်လိုအားအကောင်းဆုံးအစုံများစွာ၏အထောက်အပံ့များသည်ထိုအချိန်မတိုင်မီတွင်ရောင်းအားကျသွားဖွယ်ရှိသည်။ အစောပိုင်းကာလအတွင်းတစ်ပတ်လုံးအပေးအယူအားလုံးကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် Lego VIP တနင်္ဂနွေယခုနှစ်သည်နိုဝင်ဘာ ၂၀-၂၁ တွင်ကျရောက်သည်။
LEGO အပေးအယူ st ဘယ်အချိန်art Black Friday မှာလား။
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့၏ Black Friday သဘောတူညီချက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေသစံတော်ချိန်ညသန်းခေါင်တွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါ LEGO.com နို ၀ င်ဘာ ၂၆ ရက် ၀၀.၀၁ မှ ၂၀၂၁ တွင်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုကြည့်ရန်
Black Friday မတိုင်မီ၊ ဤကာလအတွင်းနှင့်ဤစာမျက်နှာကိုသေချာပြန်စစ်ပါ Lego အဖွဲ့သည်အစောပိုင်းငှက် Black Friday နှင့် Cyber ​​Monday ကမ်းလှမ်းချက်များကိုမကြာခဏထုတ်လွှတ်လေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ် ၀ ယ်ရန်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် Lego!